बच्चालाई दिनुहोस् ‘दिनुको आनन्द’को नैतिक शिक्षा र सिकाउँनु यी बानीहरु - ज्ञानविज्ञान
यी बानीहरु जुन बच्चालाई सिकाउँन जरुरी हुन्छ
भनिन्छ नानीदेखि लागेको बानी छुट्दैन । यसैले आफ्ना बालबालिकालाई सानै देखि राम्रा बानीहरु लगाउँनुहोस् । यहाँ त्यस्तै केहि बानीहरुको बारेमा हामीले लेखेका छौँ ।
खाना खाएपछि तपाईले राम्रोसँग मुख कुल्ला गर्नुभएको छ ? छैन भने आजैबाट बानी बसाल्नुहोस् र आफ्ना बच्चाहरुलाई पनि सिकाउनुहोस् ।
कुल्ला गर्दा दाँतको गिजामा अल्झिएका खानाका टुक्राहरुलाई फाल्ने र मुख गन्हाउने समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
कार्यालय वा अन्य टाढा हिँडेर घर फर्किएपछि आफ्नो हातखुट्टालाई राम्रोसँग साबुन पानीले धुने गर्नुहोस् । बाहिरी वातावरणमा तपाईंको हातखुट्टामा आँखाले देख्न नसक्ने हजारौँ ब्याक्टेरिया टाँसिएर आएका हुन्छन् ।
हात नधुँदा यी ब्याक्टेरिया शरीरको अन्य भागमा पनि पुग्ने र विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । तपाईंको अनुहार, हात र खुट्टामा भएको ब्याक्टेरियाले पेटको संक्रमण तथा श्वास प्रश्वासको समस्या ल्याउछ र यसले छालासम्बन्धी रोग निम्त्याउन सक्छ ।
तपाइ कत्तिको प्रार्थना गर्नुहुन्छ ? तपाइका बच्चाहरुले प्रार्थना गर्छन् कि गर्दैनन् ? नियमित प्रार्थना र पुस्तादेखि चलेको संस्कार बालबालिकालाई सिकाउँदा उनीहरुमा स्वस्थ जीवनशैलीको विकास हुन्छ ।
बिहान उठ्नेबित्तिकै आआफ्नो धर्मअनुसार मन्त्र, जप, ध्यान, पाठ गर्दा स्मरणशक्ति बढ्छ, मुटु स्वस्थ हुन्छ र डिप्रेसनबाट जोगाउँछ । प्रार्थना गर्दा तपाईंमा सकारात्मक सोच र आध्यात्मिक ज्ञानको ज्योति आउँछ ।
तपार्इं, हामी बिहान सबेरै उठ्ने बिरलै छौं । रातीको पार्टी, कामको चापलगायत कारणले एकाबिहानै उठ्न त्यति सजिलो छैन ।
आयुर्वेदमा वर्णन गरिएअनुसार आफ्नो दैनिक कार्यमा संलग्न हुनुभन्दा अगाडि केही घन्टा सबेरै हिँड्दा तपाईंमा कम तनाव हुनुका साथै दिनभर सक्रिय र खुसी बनाउँछ ।
समयमै सुत्ने र बिहान उठेर व्यायाम गर्दा तपार्इंको जीवन नै उत्पादनशील हुन्छ । साइक्याट्रिया एन्ड क्लिनिकल न्युरोसाइन्समा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार सबेरै उठ्ने व्यक्तिमा डिप्रेसनको खतरा कम हुन्छ ।
हिजोआज अधिकांश मानिस डाइनिङ टेबुलमा बसेर खाने गर्छन् । तर, हाम्रा अग्रज पुस्ताको खाने शैलीसँग तुलना गर्दा यो स्वस्थकर देखिँदैन । पुर्खाहरु जहिले पनि पिर्का वा सुकुलमा पलेँटी कसेर खाने गर्थे ।
पलेँटी कसेर खाँदा पाचन प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुको अतिरिक्त तौलसमेत घट्छ । साथै यो आसनमा खाना खाँदा बस्ने ढंगमा सुधार ल्याउने, घुँडा र जोर्नीको समस्यालाई पनि समाधान गर्छ । यो आसनले रक्त प्रवाहमा पनि सुधार ल्याउँछ ।
हामीले दैनिकजसो गर्ने एउटा साझा भूल हो, खानाको थालीसँगै ठूलो गिलासभरि पानी लिएर बस्नु । खान खाँदा पानी खानु हुँदैन भनेर बालबालिकालाई अभिभावकले सानैदेखि सल्लाह दिने हो भने बालबालिकामा पनि स्वस्थ बानीको विकास हुन्छ ।
खानासँग पानी पिउँदा पाचन प्रक्रियामा समस्या हुन्छ र एसिडिटी बढाउँछ । पोषण विज्ञहरुका अनुसार खानासँग पानी खाँदा शरीरमा ब्लड सुगरको मात्रा बढ्छ र पाचनमा पनि समस्या हुन्छ ।
के तपाईंको अभिभावकले साँझ ८ बजे अगाडि नै खाना खान र सुत्न जोड गर्नुभएको छ ? तपार्इंले पनि यस्तो सुन्दर आदत आफ्ना सन्तानमा पु¥याउनुहोस् ।
आयुर्वेदमा उल्लेख भए अनुसार साँझ पर्ने/नपर्ने बेलामा खाएको खाना प्रकृतिको नियम र चक्रअनुसार हुन्छ । शरीरलाई पनि निकै हितकर हुन्छ ।गाउँघरमा अझै पनि साँझ पर्नु अगाडि वा साँझ परेपछि खाना खाने चलन छ ।
यो आफैँमा वैज्ञानिक र स्वस्थकर भएको पोषण विज्ञहरु बताउँछन् । यो समयमा खाना खाँदा मोटोपनबाट जोगिन्छ, पाचनको समस्या घट्छ, निद्रा बढाउँछ र अर्को दिन बिहान उठ्दा फुर्तिलो भइन्छ ।
याद गर्नुहोस्, खाना खानेबित्तिकै सुत्नु भनेको रोग निम्त्याउनु हो । तर, साँझ पर्नेबित्तिकै खाने मानिस स्वाभाविक रुपमै उत्तिखेरै नसुत्ने भएकाले ऊ विभिन्न गतिविधिमा व्यस्त हुने हुँदा उसमा शारीरिक व्यायाम हुने र मोटोपनबाट स्वतः मुक्ति मिल्छ।
हाम्रा पुर्खा सधैँ चिसो पानीले नुहाउने गर्थे । तातो पानीले नुहाउँदा तालुमा पिएचको मात्रा बढाउँछ र कपाल झर्छ । यसले कपाललाई भद्दा र कमजोर तथा पातलो बनाउँछ ।
तर, चिसो पानीले तपाईको शरीर र तालुको तापक्रमलाई दिगो बनाउनुका साथै कपाल झर्नबाट रोक्छ । तसर्थ बच्चाहरुलाई पनि सानैदेखि सकभर तातो पानीले नुहाउने बानी नबसाल्नुहोस् ।
Don't Miss it कतै तपाईको हाँछ्यु रोक्ने बानी त छैन ? सावधान ! यस्ता घातक स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छ
Up Next खरबुजा खाँदा कस्ता फाइदा हुन्छन् र यो कुन रोग लागेका व्यक्तिले खानु हुँदैन, जानिराखाैँ